Waqtiyada cabsi weyn iyo baahi aad u weyn waxaan weydiin karnaa su'aasha: "Aaway Ilaah?" Waxaan aaminsanahay in kaniisadda yar ay na siin karto fikrad ah qeyb ka mid ah jawaabta. Annagu waan hubnaa. Xataa dooxada dhimashada gudcurka, Ilaah baa inala jira. Masiixu laftiisu nafteenuu isku dayay, wuxuu inaga mid noqday, nal iftiimiya gudcurkeenna. Isaga wuu la xanuunsaday, wadnuhuna wuu jabay markii qalbiyadeenu jabeen oo waxaa na siiya raaxo iyo bogsanaan xagga ruuxdiisa. Xitaa waqtiyada naxdinta leh, Eebbe wuu inala jiraa wuuna u shaqeeyaa badbaadada.